को हुन् स्याम करन ? | Hamro Khelkud
को हुन् स्याम करन ?
क्रिकेटमा कुनै भर हुँदैन । एकै ओभर, एकै खेलाडी अझ भनौं एकै बल र विकेटले नतिजा बदल्न सक्छ । क्रिकेट विश्वकपलाई सर्वाधिक लोकप्रिय र प्रतिष्ठित प्रतियोगिता मानिन्छ, चाहे त्यो क्रिकेट होस वा फुटबल । विश्वका स्टार खेलाडीको जमघटको थलो मानिने इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) विश्वकै सर्वाधिक लोकप्रिय फ्रेन्चाइज प्रतियोगिता हो । मार्च २३ देखि भारतका विभिन्न सहरमा आईपीएल चलिरहेको छ ।
सोमबार राती सम्पन्न खेलमा किंग्स इलाभेन पन्जाबले दिल्ली क्यापिटल्समाथि रोमान्चक जित हात पार्यो । १ सय ६७ रनको लक्ष्य पछ्याएको दिल्ली १९.२ ओभरमा अलआउट हुँदै १ सय ५२ रनमा समेटियो । अन्तिम १६ बलमा ८ रन जोड्दा दिल्लीले ७ विकेट गुमाएको थियो । जसमा नायक बने इंग्ल्यान्डका युवा खेलाडी साम करन । करनले अन्त्यमा ह्याट्रिक गर्दै पन्जाबलाई जित दिलाए । नाटकीय जित दिलाउने क्रममा करनले मात्र २.२ ओभरमा ११ रन खर्चेर ४ विकेट लिए ।
त्यसअघि ओपनिङ ब्याटिङ गर्न उत्रिएका उनलाई नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले एलबीडब्लू शिकार बनाएका थिए । उनले १० बलमा ३ चौका र १ छक्का सहित २० रन जोडे । दिल्लीसँगको खेल उनको आईपीएलमा दोस्रो थियो ।
जित नजिक पुगेको दिल्लीको जितमा बाधक बन्ने साम करन को हुन् ?
साम करनको जन्म सन् १९९८ जुन ३ मा इंग्ल्यान्डको नर्थम्प्टनमा भएको थियो । उनी भर्खर २० वर्ष ३ सय ३ दिनका लागेका छन् । उनको उमेर कलिलै भएपनि प्रर्दशन भरपर्दो छ । ५ फिट ९ ईन्च (१.७५) मिटर अग्ला कदका करनको पुरा नाम स्यामुअल मैथ्यु करन हो । उनी बाँया (देब्रे) हाते ब्याट्सम्यान तथा मिडियम पेश बलिङ गर्ने गर्दछन् । उनी जिम्बाबेका पुर्व क्रिकेटर समेत रहेका केभिन कुरनका कान्छा छोरा हुन् । केभिनका तीनै भाई छोरा क्रिकेटर छन् ।
इंग्ल्यान्डका सिनियर टोलीबाट खेलिरहेका अलराउणन्डर टम करन जेठा छोरा, बेन करन माईला र साम करन कान्छा छोरा हुन् । अर्थात इंग्ल्यान्डकै अर्का स्टार अलराउण्डर टम करन उनका साख्य दाई पर्दछन् । क्रिकेट परिवारबाट हुर्केका करनको लगाव सानै देखी क्रिकेटमानै थियो । दाजु र बुबाबाट उनले सानै देखी धेरै राम्रो क्रिकेट सिके ।
उनको क्रिकेट यात्रा यू१५ उमेर समूहबाट अघि बढेको हो । इंग्ल्यान्डको चर्चिच क्रिकेट क्लव सर्रेबाट घरेलु क्रिकेट यात्रा थालेका करनले सन् २०१४ मा यू१५ र यू१७ क्रिकेट प्रतियोगिता खेले । यस प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेपछि एक वर्षपछि केन्टविरुद्ध इंग्ल्यान्डको चर्चित टी२० प्रतियोगिता नेट वेस्ट बलास्टमा सर्रेबाटनै डेब्यू गरे ।
सन् २०१५ मा नै नर्थह्याम्पटनशायरविरुद्ध डेब्यू गर्दै ७ ओभरमा ३२ रन खर्चेर ४ विकेट लिए । घरेलु प्रतियोगितामा राम्रो छाप छोडेका उनले सन् २०१६ मा बंगलादेशमा सम्पन्न यू१९ विश्वकपमा इंग्ल्यान्डको प्रतिनिधित्व गरे । उनले ६ खेलमा ४.३६ को इकनोममी ७ विकेट लिनुका साथै ५ खेलमा २ सय १ रन जोडेपछि उनीमाथि सबैको ध्यान तानिएको थियो । त्यो विश्वकपको प्रर्दशनले नै उनलाई त्यसै बेला भविष्यमा इंग्ल्यान्डको टोलीमा पर्ने संकेत दिएको थियो । करनले पछिल्लो समय गरेको प्रदर्शनले उनलाई कलिलो उमेरमै आधुनिक विश्व क्रिकेटको स्टार अलराउन्डरको रुपमा हेरिन थालिसकेको छ ।
सन् २०१८ जुन २४ मा अष्ट्रेलियाविरुद्ध १९ वर्षको उमेरमा वान डे क्रिकेटमै डेब्यू गरे । उक्त डेब्यूमा १६ रन बनाउनुको साथै दुई विकेट लिएका थिए । त्यसअघि जुन १ मा पाकिस्तानसँगको दोस्रो टेष्टमा उनले सिनियर टोलीमा डेब्यू गरेका थिए । गत अगष्ट-सेप्टेम्बरमा भारतसँगको पाँच खेलको टेस्ट सिरिजमा साम करनले उत्कृष्ट अलराउन्ड प्रर्दशन गर्दै घरेलु टोली इंग्ल्यान्डलाई ४–१ ले सिरिज जिताउन योगदान दिएका थिए ।
उक्त सिरिजको पहिलो खेलमै म्यान अफ द म्याच चुनिएका उनले उक्त सिरिजमा ४ खेलमा ७ पालीमा २ सय ७२ रन जोड्नुका साथै ११ विकेट लिएपछि म्यान अफ द सिरिज पनि चुनिए । जसले उनलाई थप सफलता र चर्चाको शिखरमा पुर्यायो । भारतसँगको टेस्टमा धमाकेदार प्रर्दशनपछि आईपीएलको अक्सनमा २० वर्षिय ठिटो करनलाई पन्जावले ७ करोड २० लाख भारतीय रुपैँया खर्चेर टोलीमा अनुबन्ध गरेको थियो । राजस्थान रोयल्सविरुद्ध डेब्यू गरेका उनले ४ ओभरमा ५२ रन खर्चेर २ विकेट लिए । पहिलो खेलमा महँगो सावित भएका कारण मुम्बई र कोलकतासँगको खेलमा बेन्चमा बस्नु परेको थियो ।
हालसम्म उनले इंग्ल्यान्डबाट ९ टेस्टमा १६ पालीमा ब्याटिङ गर्दै ३२.४२ को औसतमा कुल ४ सय ५४ रन जोडेका छन् । सर्वाधिक्स स्कोर ७८ रन रहँदा बलिङ तर्फ १५ विकेट लिएका छन् । उनले यसबीचमा दुई वानडे खेली सकेका छन् । यो प्रर्दशनले इंग्ल्यान्डमानै आगमी मे ३० देखी सुरु हुने वान डे विश्वकपको लागि उनको स्थान बलियो बनेको छ । अझ बलियो बनाउन आईपीएलमा उनले उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्न आवश्यक छ ।